Ezekieri 31 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kuwa kweIjipiti, musidhari wakareba (1-18)
31 Mugore rechi11, mumwedzi wechitatu, pazuva rekutanga remwedzi wacho, shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana wemunhu, iti kuna Farao mambo weIjipiti uye kuvanhu vake vazhinji,+‘Wakafanana naani paukuru hwako? 3 Paiva nemuAsiriya, iwo musidhari wekuRebhanoni,Waiva nemapazi akanaka akaita sebvokocho resango rine mumvuri, uye wainge wakareba,Uchinosvika kumakore. 4 Mvura yakaita kuti ukure chaizvo, uye zvitubu zvemvura zvakadzika zvakaita kuti urebe. Wainge wakadyarwa pakati pehova dzemvura;Migero yezvitubu zvacho yaidiridza miti yese yesango. 5 Ndokusaka wakareba kupfuura mimwe miti yese yesango. Mapazi awo akakura chaizvo uye wakava nemapazi mahombe akawanda,Nekuti muhova dzawo maiva nemvura zhinji. 6 Shiri dzese dzedenga dzaivakira matendere adzo pamapazi awo,Mhuka dzese dzesango dzaiberekera pasi pemapazi awo,Uye marudzi ese ane vanhu vazhinji aigara pamumvuri wawo. 7 Wainge uchiyevedza uye wakanaka, uine mapazi akakura,Nekuti midzi yawo yaidzika kusvika pane mvura zhinji. 8 Hapana mimwe misidhari yemumunda waMwari+ yainge yakafanana nawo. Hapana mijunipa yaiva nemapazi mahombe akaita seawo,Uye hapana mipurani yaiva nemapazi akaita seawo. Hapana mumwe muti waiva mumunda waMwari wakanga wakanaka saiwo. 9 Ndakaita kuti unake uye kuti uve nemashizha mazhinji,Uye mimwe miti yese yemuEdheni, munda waMwari wechokwadi, yaiuitira shanje.’ 10 “Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Nekuti muti wacho wakareba kwazvo, ukanosvika kumakore, mwoyo wawo ukazvikudza nekureba kwawo, 11 ndichauisa muruoko rwemutongi ane simba wemarudzi.+ Chokwadi achaurwisa, uye ndichauramba nemhaka yekuipa kwawo. 12 Vanhu vekune imwe nyika vane utsinye kupfuura vamwe vese vachaudonhedza vousiya mumakomo, uye mashizha awo achawira mumipata yese, uye mapazi awo achatyoka owira muhova dzese dzenyika yacho.+ Marudzi ese epanyika achabva pamumvuri wawo ousiya. 13 Shiri dzese dzedenga dzichagara pahunde yawo yakadonha, uye mhuka dzese dzesango dzichagara pamapazi awo.+ 14 Saka hapazovi nemuti uri pedyo nemvura unoreba zvakadaro kana unosvika kumakore, uye hapazovi nemuti unowana mvura yakakwana unosvika kumakore. Nekuti yese zvayo ichaurayiwa, yova munyika iri pasi pevhu, pamwe chete nevanakomana vevanhu vari kupinda mugomba.’* 15 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndichaita kuti pave nekuchema pazuva richapinda muti wacho muGuva.* Ndichadaro pandichavhara mvura yakadzika ndomisa hova dzayo kuti mvura yacho zhinji isayerera. Ndichaita kuti Rebhanoni ive nerima nemhaka yawo, uye miti yese yesango ichaoma. 16 Panonzwika ruzha rwekuwa kwawo, ndichaita kuti marudzi adedere pandichaupinza muGuva* pamwe chete nevaya vese vari kupinda mugomba.* Uye miti yese yemuEdheni+ yakanaka kwazvo, miti yekuRebhanoni inoyevedza kupfuura mimwe yese, yese iya inowana mvura yakakwana, ichawana nyaradzo munyika iri pasi pevhu. 17 Yapinda naye muGuva,* mune vaya vakaurayiwa nebakatwa,+ pamwe chete nevaya vaimutsigira vachigara mumumvuri wake pakati pemarudzi.’+ 18 “‘Pane here muti wemuEdheni waiyevedza uye wainge wakakura sewe?+ Asi uchapinzwa munyika iri pasi pevhu pamwe chete nemiti yemuEdheni. Ucharara pasi pakati pevaya vasina kuchecheudzwa, nevaya vakaurayiwa nebakatwa. Izvi ndizvo zvichaitika kuna Farao nevanhu vake vazhinji,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”